Dr Paul McHugh - Mmekọahụ na Mmekọahụ | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
~ Nkọwa Pụrụ Iche ~
Mmekọahụ na Mmekọahụ
Nchoputa sitere na ndu,
Psychological, na Social Sciences
Nọmba 50 ~ Fall 2016 ~ $ 7.00 ……….
Nọmba 50 ~ Fall 2016
Mara nke Editor: Ajụjụ ndị metụtara mmekọahụ na okike na-emetụta ụfọdụ akụkụ mmekọrịta chiri anya na nke ndụ mmadụ. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ha akpasuwo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị America iwe. Anyị na-enye akụkọ a - Dr. Lawrence S. Mayer, onye ọrịa na-ahụ maka ọrịa na-ahụ maka ọrịa isi na Dr. Paul R. McHugh dere, na-ekwu na ọkachasi onye isi ọkaibe nke America kachasị na ọkara narị afọ gara aga-n'olileanya nke imeziwanye nghọta ọha na eze banyere ndị a ajuju. N’inyocha nyocha sitere na sayensị, ọgụgụ isi, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akụkọ a gosiri na ụfọdụ nkwupụta a na-anụkarị gbasara mmekọahụ na okike akwadoghị nke sayensị. Akuko a nwere nlebara anya puru iche banyere onu ogugu nke nsogbu oria uche n’etiti ndi LGBT, na aju ajuju banyere onodu sayensi n’ime mmuta banyere umuntakiri ndi amataghi na nmeko ha. A na-achọkwu mgbalị maka inye ndị a nghọta, nlekọta, na nkwado dị ha mkpa iji bie ndụ dị mma, na-aga nke ọma.
okwu mmalite 4
Nchịkọta onye isi 7
Nchoputa sitere na ndu, ndu nka, ya na ndi mmadu
Lawrence S. Mayer, MB, MS, Ph.D. na Paul R. McHugh, MD
Okwu Mmalite 10
Nkebi 1: Ntuziaka gbasara mmekọahụ 13
Nsogbu na finkọwa Key Concepts 15
Ihe gbasara ochicho nke mmekorita nwoke na nwanyi 19
Usoro mmekọrịta nwoke na nwanyị 21
Ma Aka “Amụrụ thatzọ Ahụ” 25
Nnyocha nke ụmụ ejima 26
Peeji (1 nke 29): 1 23	... 29Next »